Banyere Anyị - Chemequip IndustriesCo., Ltd.
Chemequip Industries Co., Ltd . emi odude ke Songjiang ulo oru ogige nke Shanghai dị ka ihe ISO 9001 asambodo ụlọ ọrụ. Anyị bụ ndị a professsional emeputa nke Patecoil nke bụ a elu arụmọrụ efere okpomọkụ Exchanger.As a ndú nke okpomọkụ mgbanwe technology na China, anyị nwere iri abụọ na asatọ nọọrọ onwe ha arịa ikike ọgụgụ isi.
Anyị na-ewebata teknụzụ dị elu na akụrụngwa site na North America maka ijere ụlọ ọrụ nke oge a na mpaghara kemịkalụ, ike, ọgwụ na nchekwa gburugburu ebe obibi. Dabere na afọ iri na atọ nke ahụmahụ, na-enye isi asọmpi nke nkà na ụzụ na akụrụngwa, iji nyere ndị ahịa aka melite asọmpi ngwaahịa na uru.
Onye Mmekọ - Solex Thermal Science lnc
Solex Thermal Science Inc, bụ onye nrụpụta mba ụwa amatapụtara maka ngwa mgbanwe igwe, site na teknụzụ ọhụụ ọhụụ na ndị ọkachamara na ndị ọrụ teknụzụ dị elu iji merie aha ọma.Solex n'isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị na Calgary nke Canada, yana ngalaba mmepe ngwaahịa na teknụzụ, na ụlọ ọrụ ọrụ ntanetị na China.
Solex kwadoro Chemequip maka ihe karịrị afọ 16 iji nye ihe ngwọta dị mma maka ikpo ọkụ, jụrụ ma ọ bụ ihicha nke nnukwu ihe siri ike.
Chemequip Industries Co., Ltd. isi azụmaahịa bụ ịkpọkọta ndị na-eme mgbanwe ọkụ ọkụ dị iche iche dị elu na modulu mgbanwe okpomọkụ na efere ọkụ na-ebufe efere dị ka ihe bụ isi, gụnyere: ntụ ntụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ gas, akwa mkpuchi mmanụ a ,ụ, mkpofu ọkụ ọkụ. modul, shei na efere okpomọkụ Exchanger, ụlọ elu n'elu condenser, ice flaker na chiller, n'efu okpomọkụ mgbake, ebu belt jụrụ efere / jụrụ ebu, igbukpọ akara jụrụ efere na electroplating jụrụ The ngwaahịa na-bụ-eji na ubi nke chemical ụlọ ọrụ, ahịa ọgwụ, ike na nchekwa gburugburu ebe obibi, N'otu oge ahụ, a na-ebupụ ya na Germany, Spain, United States, Brazil, Taiwan, Vietnam na obodo na mpaghara ndị ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo sistemụ ISO9001
Industrial slurry ice igwe, Igwe anaghị agba nchara dimple jaket , Dimple efere okpomọkụ Exchanger, Igwe mmiri mmiri, Imikpu okpomọkụ Exchanger maka chernobyl, Commerce slurry ice igwe,